Uluhlu lwe-SAS lwezixeko ezitsha eziya kwilizwe nakwamanye amazwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Uluhlu lwe-SAS lwezixeko ezitsha eziya kwilizwe nakwamanye amazwe
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula iindaba zaseDenmark • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula iNorway News • Ukwaphula iindaba zaseSweden • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
IScandinavia Airlines System (SAS) yasekwa ngonyaka we-1946 ngesivumelwano semvumelwano phakathi kweenqwelo-moya ezintathu zaseScandinavia-iDet Danske Luftfartselskab, inqwelo-moya yaseDenmark; UDen Norske Luftfartselskap, umphathi wenqwelo moya waseNorway; kunye neSvensk Interkontinental Lufttrafik AB, inqwelo-moya yaseSweden.
Namhlanje i-SAS ihlala yomelele kwaye ikwindlela yokwanda ngaphandle komngeni wobhubhane we-COVID-19.
I-SAS inyusa tUhamba ngenqwelomoya esuka kwizixeko eziphambili zaseScandinavia iStockholm, iCopenhagen, iOslo, neBergen ukuya kwiindawo ezibalulekileyo kuthungelwano lwayo ukuphucula ukubanxibelelana kwabahambi.
I-SAS ngoku izakusebenzela zonke iindawo zayo zasekhaya eNorway naseSweden xa indlela yaseArlanda-Sundsvall ivulwa kwakhona ngoSeptemba.
Inani leenqwelo moya kwi-SAS eziya kwiindawo ezibalulekileyo kubahambi ngenqwelomoya eYurophu ziya kwanda.
Inzala ekhulayo kuhambo lweempelaveki kunye nekhefu lesixeko ukuya kwizixeko zaseYurophu yenza ukuba i-SAS iphinde iqhubeke neendlela zayo eziya eAmsterdam, eDublin, eFlorence, eKrakow nasePrague. Kukho inani elinyukayo leenqwelo moya ukuya kwiindawo ezishushu zaseMeditera emazantsi eYurophu nakwiiCanary Islands ukuhlangabezana neemfuno ezikhulayo ezivela kubahlali beholide.
I-SAS izakuhamba ngenqwelomoya ngokuthe ngqo ukusuka kumakomkhulu aseScandinavia ukuya kwiindawo ezininzi zaseMelika ukusukela ngoSeptemba ukuya phambili kwaye bazakubakhona eAsia kwiindlela ezisuka eCopenhagen ukuya eTokyo naseShanghai.
I-SAS iyaqhubeka nokuzisa inqwelomoya entsha neyonga umbane kwaye inenye yeenqwelo moya zaseYurophu. Inqwelomoya entsha ine-15-30% yokusebenzisa amafutha asezantsi, xa kuthelekiswa neenqwelo-moya abazitshintshayo. Inqwelomoya entsha yaseburhulumenteni iza kunika abathengi be-SAS indlela emnandi ngakumbi, ekhululekile, kunye nohambo oluzinzileyo.
I-SAS idibanisa iScandinavia kunye nehlabathi elisebenza kwezi ndawo zilandelayo:
EGehenburg Aalborg Alta Alicante
IKiruna Faroe Islands Aarhus Oslo
ULuleå bergen Bardufoss Stavanger
Malmö EGehenburg bergen Stockholm
URonneby Oslo UBillund Trondheim
Umeå Trondheim IHarstad / iNarvik Kristiansand
Ukutyelela Aberdeen Haugesund Alicante
Ängelholm Alicante I-Kirkenes Oslo
I-undstersund Amsterdam Kristiansand
Alicante eAtene Lakselv Stavanger
eAtene Berlin Molde Alicante
Berlin Brussels I-Tromsø Oslo
UBillund Chania Trondheim Trondheim
Dusseldorf Faro eAtene Alicante
Frankfurt IGazipasa Brussels Copenhagen
IGazipasa IGdansk Chania Oslo
Krakow Hamburg Dusseldorf I-Tromsø
Lisbon Larnaca IGazipasa
London Las Palmas IGdansk
Iipaneli Milan Miami
Inew york Munich Milan
Intle Iipaneli Inew york
Oslo Inew york Intle
Palma de Mallorca Intle Palma de Mallorca
eRoma Reykjavik eRoma
Umehlulelwano eRoma Umehlulelwano
Ukubonisana kuyaqhubeka ukulungisa izithuba eJamaica ...
Ukucwangcisa i-Carnival Cruise ukusuka eFlorida Port Miami e ...
ISchauinsland Reisen ilawula ishishini lokuhamba ngenqwelomoya ...